Yiqiniso, isikhumba abasha amahle - yinto abantu abaningi bafisa. Cosmetology Modern futhi imithi tebuciko ukunikela zinengi izindlela ukuqeda nokuwohloka kwesikhumba, imibimbi, cellulite, nezinye zamehlo. Futhi inketho kuhle kuyinto carboxytherapy. Kuyini lokhu? Yini imiphumela ongayilindela? Hhayi ingozi empilweni impatho enjalo? Izimpendulo zale mibuzo abafundi abaningi.
Carboxytherapy - indlela yomthetho, ngokuyisisekelo esakhiwa ngo ekuphathweni ongama medical, oyinyumba-carbon dioxide. Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi kungcono ngisho nangaphezu mesotherapy bendabuko, njengoba inikeza kube nomphumela omuhle kakhulu, futhi akudingi isingeniso ku isikhumba ezibizayo Vitamin cocktail.
Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi lesi simiso rejuvenation akuyona njengoba ezintsha njengoba UMUNTU angase acabange. Ngokokuqala ngqá kule nqubo iye yenziwa ku-yalolucwaningo 30 kwekhulu elidlule eFrance. Noma kunjalo udumo ekhethekile usezuze eminyakeni embalwa edlule. By the way, Cosmetology eMoscow kahle kakhulu, ngakho ikhono ukudlula inkambo enjalo rejuvenation wonke umhlali kanye guest yenhloko-dolobha.
izimiso eziyisisekelo indlela
Abantu abaningi banesithakazelo imibuzo mayelana yini umphumela umjovo we-carbon dioxide. Kuyathakazelisa ukuthi inqubo enjalo oxygenates emisipheni. Iqiniso lokuthi ngokumelene ukwanda okukhulu kwezincwadi ezingeni -carbon dioxide ivela yokufakelwa anoxia, obusiza ukugeleza isamba esengeziwe sika-oksijini izicubu igazi dermal. Ngesikhathi esifanayo i-carbon dioxide owethulwa lususwe lonke emzimbeni ipheshana zokuphefumula nezinso imizuzu engaphezu kuka-30 ngemva kokuhlinzwa.
Ukwandisa-mpilo ezingeni oyenza isebenze umzimba. Inqubo kuyasiza ukuba ukhiphe ubuthi, esheshisa inqubo fat eqhekeza, futhi normalizes lymph amanzi. Ngaphezu kwalokho, i-carbon dioxide kuvusa fibroblast isebenze zamagama siqu collagen ethandele, esinikela wokudonsa futhi umphumela ekuvuseleleni.
Ngokushesha kuyafaneleka ukuthi inkambo enjalo yokwelashwa kungaba kokubili ngenxa yobuhle nokusikwa yezokwelapha izinkomba. Ngokwesibonelo, umjovo we-carbon dioxide asetshenziswa emikhakheni ehlukahlukene imithi ukwelapha ukubonakaliswa psoriasis kanye izifo ezihlukahlukene rheumatological kuhlanganise periarthritis, samathambo ngisho osteonecrosis. Inqubo efanayo yasetshenziselwa aphathe arteriopathies, varicose izilonda ngisho nezinkinga Erectile.
Yiqiniso, carboxytherapy emangalisayo wokwakha kwezokwelapha yobuhle. Ikakhulukazi, kungasiza ukuqeda izibazi (noma, okungenani, ngibenze kancane ebonakalayo), kanye elula izimpawu esikhumbeni. Okubonisa ukulapha iyona cellulite, futhi emazingeni ahlukahlukeneko. umjovo Futhi kudambisa isikhumba nokuwohloka kwesikhumba, kokubili emzimbeni futhi ebusweni.
By endleleni, uma kuziwa rejuvenation ebusweni, le beauticians Sisikisela ukuqala ukwelashwa emva kweminyaka engu-30. isikhumba ukukhubazeka abahlukahlukene luqedwe kungakhathaliseki engu-isiguli.
Eqinisweni inqubo carboxytherapy akuthathi isikhathi esiningi - kusuka imizuzu 20 kuya ku-60 kuncike usayizi wendawo ngayo. Isiguli ihlala esihlalweni ukhululekile, uchwepheshe ephatha ngokucophelela isikhumba magciwane. wamafutha izinzwa ingasetshenziswa uma kunesidingo.
Ukuze ukwelashwa zokwelapha ezisebenzisa oyinyumba carbon dioxide futhi isibhamu esikhethekile diffusions okuvumela control eqondile phezu inani igesi kwethulwa. Ukuze umjovo usebenzise inalidi alahlwayo ne Imibhobho esemzimbeni ekhethekile eyenza ukuba inqubo kancane ubuhlungu.
Kuye kanjani izinkinga zamanje igesi busuka dermis noma hypodermis. Imijovo eyenziwe isentimitha ngamunye, ukuvumela the ningi NEMPUMELELO NGAPHAKATHI ukusingatha endaweni inkinga. Ngokusho izimpendulo iziguli, inqubo ngezinye izikhathi kube buhlungu, kodwa konke kuncike izici ngamunye kanye nozwela umzimba.
Isikhathi yokwelapha kuncike ngobucayi inkinga. Ezimweni eziningi, okokuqala, uchungechunge 4-10 imihlangano nge esingaba amasonto 1-2. Esikhathini esizayo, ochwepheshe batusa ukuba ibhekane inqubo ngisho izikhathi 2-4 ngonyaka ukuze silondoloze imiphumela.
Ayikho umjovo Carboxytherapy kanye nezici zayo
Kaningi iziguli ukhethe inqubo okuthiwa carboxytherapy kungekho umjovo. essence yayo kuyafana - esikhumbeni-carbon dioxide, ngemva kwalokho kukhona ukusebenza kwegazi igazi lymph amanzi ukuzinza. Umehluko kuphela indlela yokuphathwa - isikhutha sisetshenziswa ngqo isikhumba, ngaphandle imijovo, ehlanganisa buso ekhethekile.
Le nqubo ivumela ukufeza nomphumela omuhle. Ngokwesibonelo, akukho umjovo Carboxytherapy Face kuqinisa Uhlaka kwemisipha ne isikhumba, okuvumela ukususa imibimbi futhi wenze emphethweni enkulu obunganakekile. Ngaphezu kwalokho, ngcono ukuthungwa isikhumba. Njengoba ungacabanga, lokhu inqubo abakwazi ibhekwe Analogue ephelele umjovo, njengoba umphumela lubonakaliswa buthaka kakhulu. Nokho, Cosmetology yesimanje inqubo efanayo yayisetshenziswa ukuze ukuphoqa Imiphumela kusukela peels, micro-electroporation, ukuhlanzwa yezimonyo nezinye izinqubo yobuhle.
Muhle ukwelashwa ebusweni kanye nemiphumela yabo
Cishe wonke yesikhungo of Cosmetology noma ubuhle salon inikeza inqubo efanayo yokulungiswa isikhumba ebusweni. Ngempela, carboxytherapy kusiza ukuqeda izinkinga eziningi. Ikakhulukazi, ngomjovo kuyinto ukushukuma collagen zemvelo, esinikela umphumela isikhumba kokuqina.
ubuso Okusaqanda likhanya, imibimbi kuthiwa esehlelembe, fade izikhwama nemibuthano amnyama ngaphansi kwamehlo, emphethweni Nasolabial ziphelelwa abukhali. Ngaphezu kwalokho, indlela yokwelapha kungasiza ukuqeda iminonjana induna kanye spider emithanjeni kanye amnyama. A inqubo efanayo manje kabanzi ukuqeda okuthiwa kwesilevu "lesibili". Ngaphezu kwalokho, umjovo we-carbon dioxide kuyasiza kulesetayelekile umzimba futhi wenze isikhumba bobusha xaxa.
Izimo yokwelapha ukuziphatha
Yiqiniso, kungenziwa i-lezo zinqubo rejuvenation eyenziwa akupheleli - kukhona contra-izinkomba, futhi uhlu lwabo nakanjani kufanele ufunde. ke Okokuqala kufanele kuphawulwe ukuthi imijovo ungaphenduki, uma endaweni iphathwa kwesikhumba kukhona izimpawu nezilonda noma izifo ezithile - Ezimweni ezinjalo, isiguli kufanele uqale ukwelashwa.
Izimo Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke futhi zihlanganisa isifo sokuwa, infarction yamuva esivimba amanzi, kanye nomfutho wegazi ophezulu okungamahlalakhona, umlando phlebitis esidlule. Futhi, inqubo is hhayi kwenziwe in iziguli esingamahlalakhona kwemigudu yokuphefumula noma ukumelwa kwezinso. Ukukhulelwa ibele kusebenza futhi Izimo yesikhashana. Imijovo banqatshelwe kwenzeka ukuthi isiguli izinkinga nge igazi ekunqandeni. Futhi ukwelashwa yingozi ezigulini kokuthola anticoagulants, kwazise ziningi ukopha eziningi ongama.
Ingabe lezo zinkinga kanye nemiphumela engemihle zingenzeka?
Ingabe sikhona isici esithile uhlobo inkinga ukuthi kungaholela Carboxytherapy? Kuyini futhi kungakanani kuyingozi? Kuthiwani uma uthola labo noma ezinye imiphumela emibi? Lawa imibuzo ukucela udokotela wakho cishe njalo nesineke.
Ngavele kumelwe bathi imiphumela emibi ezingavamile kakhulu, kodwa eziyingozi kwezokwelapha zanamuhla, futhi azifani. Iqiniso lokuthi e-carbon dioxide - into yemvelo nomzimba womuntu. Ngokusho ucwaningo, ngesikhathi umsebenzi emisipheni uveza igesi okuningi kuka phakathi naleyo nqubo. Futhi sibonga ukusetshenziswa amathuluzi oyinyumba ingozi yokutheleleka noma ukuvuvukala lincishisiwe.
Into kuphela kufanele sinake - lokhu kungokwesikhashana engemihle. Ikakhulukazi, ezinye iziguli esekhala umuzwa esivuthayo ubuhlungu, okuyinto ngokuvamile ehambisana ne-ukunwetshwa okungazelelwe imithambo yegazi. Ngaphezu kwalokho, endaweni ukuphathwa kungadala ukuvuvukala kancane. Zonke lezi zenzakalo angabhekwa ngokuphelele evamile, njengoba zidlula bebodwa emva kwezinsuku ezimbalwa.
Yiqiniso, iziguli eziningi zinesithakazelo ngokuyinhloko umbuzo izindleko inqubo. Ngokushesha kuyafaneleka ukuthi eziningi lapha incike imishini esetshenziswa kanye cocktail umjovo, udokotela amakhono kanye, yebo, inqubomgomo intengo emtholampilo noma salon. Ngaphezu kwalokho, i-akhawunti kufanele kuthathwe, futhi idolobha lokuhlala - ke akuyona imfihlo ukuthi Cosmetology eMoscow lingaphezulu kakhulu kuka kwezinye izifunda of Russia.
Ngaphezu kwalokho, izindleko kuncike endaweni ukwelashwa. Ngokwesibonelo, uma isiguli iphathwa nomunye noma enye indawo zomzimba, phezu kwendawo 200 ngamasentimitha square kufanele ukhokhe ruble 2 kuya kwezingu-4. Ngakho, uma ngcono isikhumba emhlabeni iso, omunye sitakuba abiza ayizinkulungwane 1-2, futhi uma ufuna qinisa lwesisu noma kwamathanga, intengo ngeke isukela 5 izinkulungwane 7.
Ungakhohlwa ukuthi ukuze kuzuzwe imiphumela esiphezulu ukuthatha ukwelashwa okungenani ezine.
Yiqiniso, abaningi banesithakazelo manje imibuzo mayelana nokuthi ingabe carboxytherapy ngempumelelo. Kuyini lokhu? Iyini inqubo? kube yinqubo okubuhlungu rejuvenation kanjani? Siphakamisa ukuthi sinake Izibuyekezo zabantu eziye sivele sidlulile ukwelashwa okunjalo.
Iziguli eziningi akhayo mayelana nenqubo. Ngempela, isikhumba kuba seziyashelela ngemva inkambo imijovo, imibimbi nezinye ukukhubazeka babe obunganakekile. Abesifazane abathi ukuthi kunemidanti impela ekulweni cellulite, ikakhulukazi kanye massage namanye amacebo.
Ngaphezu kwalokho, carboxytherapy hhayi eqolo. Impatho enjalo inikeza Cosmetology isikhungo ngasinye, ubuhle izikhungo kanye nemitholampilo wezokwelapha yobuhle. Ngokusho Izibuyekezo cosmetologists, imiphumela emibi ezingavamile kakhulu. Yingakho yokwelapha enjalo ngokubaluleka kuthandwa hhayi kuphela phakathi kwabesifazane kodwa futhi amadoda.
Tattoo zabesifazane ngezinyawo zakhe
"Topikrem": ukubuyekezwa kanye intengo. "Topikrem" izingane: Izibuyekezo
Alyssum iminyaka eminingi: incazelo, ukutshalwa, esiphelweni
Kanjani ukuyeka ukuphuza ubhiya
"I-Century Adalin": ukubuyekezwa kwababukeli be-movie nabagxeka, izibuyekezo, abadlali
VF Odoyevski, "Kubi Gnedko": isifinyezo. "Kubi Gnedko": protagonists
Ihhotela Sea Galaxy, Sochi libuyekeza nezithombe zezivakashi